आज सुन चाँदीको भाउ स्थिर, मुल्य कति ? हेर्नुहोस् ... - Naya Pusta
आज सुन चाँदीको भाउ स्थिर, मुल्य कति ? हेर्नुहोस् …
Naya Pusta २०७४ चैत्र ३० April 13, 2018 गते प्रकाशित
काठमाडौं । बिहीबार तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेर तोलाको ५८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज शुक्रबार स्थिर रहेको छ।
बिहीबार अमेरिका र सिरियाको द्वन्द्वका कारण सुनको भाउ उकालो लागेको थियो।
यस्तै आज चाँदीको पनि भाउ पनि स्थिर रहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको मुल्य ७ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
२०७४ चैत्र २८
दाङ । सल्यानको कपुरकोटमा मोटरसाइकलमा सर्प बसेपछि नाग देवता भन्दै पूजा र दर्शन गर्नेहरुको घुईंचो लागेको छ। मंगलबार बेलुकी ७ बजेतिर मोटरसाइकलमा कपुरकोटबाट पाखापानी जाँदा बाटोमा सर्पले बाटो छेकेको र रोकेर झरेपछि सर्प मोटरसाइकलमा बसेको पाखापानीका खिमेन्द्र सेनले बताउनुभयो। सर्पले बाटो छेकेपछि मोटरसाइकल रोकेर आफूले अरुलाई बोलाएको सेनको भनाई छ । सेनले खबर
Edit“सर्पले बाटो छेकेर मोटरसाइकलमा बसेपछि !”
यो हो विश्वकै पहिलो पोर्न युनिभर्सिटी, जहाँ यसरी हुन्छ पढाई !
२०७४ चैत्र २७
एजेन्सी । पोर्न अर्थात् यौनका बारेमा शिक्षा दिनका लागि भन्दै संसारका सयौं विद्यालय तथा कलेजहरुले यससम्बन्धि पाठ्यक्रम तयार पारी पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । तर इटालीमा भने सम्पूर्ण पढाई नै यौनका बारेमा हुने विश्वविद्यालय नै स्थापना गरिएको छ । इटालीका पोर्नस्टार रोको सिपफ्रेदील स्थापना गरेको युनिभर्सिटी अफ पोर्नमा केवल यौनका बिषयमा
Edit“यो हो विश्वकै पहिलो पोर्न युनिभर्सिटी, जहाँ यसरी हुन्छ पढाई !”
बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिपको आकार ? यस्ताे अचम्मको छ कारण
बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त ? उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ? केटाहरुलाइ जान्ने जिज्ञासा
यो पनि पढ्नुहोस् : आज ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
Edit“बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिपको आकार ? यस्ताे अचम्मको छ कारण”
श्रीमतीसँग सुतेका श्रीमानले मध्यरातमा पलङमुनि हेर्दा होस् उड्यो !
२०७४ चैत्र २६
श्रीमतीसँग मस्त सुतिरहेका श्रीमान् राती साढे २ बजे पलङमुनिबाट आवाज आएपछि ब्यूँझिए । उनले पलङमुनि के रहेछ भनेर हेर्दा त्यहाँ उनकी श्रीमतीका प्रेमी लुकिरहेको भेट्टाए । बेडरुममा श्रीमतीका प्रेमी भेट्टाएपछि उनी रिसले आगो भए । उनले प्रेमीलाई त्यहीँ मरणासन्न हुनेगरी कुटे । हल्लाखल्ला भएपछि गाउँलेहरु जम्मा भए । ती व्यक्तिले श्रीमती
Edit“श्रीमतीसँग सुतेका श्रीमानले मध्यरातमा पलङमुनि हेर्दा होस् उड्यो !”
बाख्रा बचाउनका बाघसँग लड्ने युवती, त्याे रात जे भयाे
२०७४ चैत्र २३
२१ वर्षीय रुपाली मेश्राम एक पातली गाउँले युवती हुन् । कलेजबाट उनले भर्खरै व्यवस्थापनमा स्नातक उत्तीर्ण गरिन्। साधारण परिवारकी यी युवतीको टाउको, दुवै हात–खुट्टा र कम्मरमा घाउ देखिन्छ। टाउको र कम्मरको घाउ गहिरो भएकाले टाँका लगाइएको छ । नागपुरको सरकारी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पीटलको उनको डिस्चार्ज कार्डमा स्पष्टसँग लेखिएको छ –जङ्गली जनावर बाघको
Edit“बाख्रा बचाउनका बाघसँग लड्ने युवती, त्याे रात जे भयाे”
अप्रिलमा जन्मनुभएको हो ? अप्रिलमा जन्मिएका व्यक्तिमा हुन्छ अचम्मको स्वभाव
कुनै पनि सालको अप्रिल महिनामा जन्मनेहरूका विषयमा एस्ट्रोलोजी भन्छः अप्रिलमा जन्मनेहरू अत्यन्त सुन्दर, रोबदार, जिद्दी तथा हँसिलो हुन्छन् । कलात्मक चिजवस्तुको सौखिन तथा एडभेन्चर रुचाउने स्वभावका हुन्छन् । यिनीहरूमा एक विशेष प्रकारको पागलपन (सकारात्मक अर्थमा) पाइन्छ । यिनीहरूको स्वभाव अचम्मलाग्दो हुन्छ । रिसमाथि अलिकति पनि नियन्त्रण रहँदैन । मुखमा आएको कुरा
Edit“अप्रिलमा जन्मनुभएको हो ? अप्रिलमा जन्मिएका व्यक्तिमा हुन्छ अचम्मको स्वभाव”
२०७४ चैत्र २०
काठमाडाैँ । तपाईँ हामीमा अचम्मका बिभिन्न आनीबानीहरु छन् । जुन हामीले जान अन्जानमा दैनिक जीवनमा निरन्तर गरिरहेका हुन्छौँ । यस्तै मध्येको एक अनौठो बानी हो औँला पड्काउनु । के तपाईँले पनि औँला पड्काउनु हुन्छ ? त्यसो गर्दा किन आवाज आउँछ होला ? यसबारेमा हालै वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानबाट अनौठो कारण पत्ता लगाएका
Edit“औँला पड्काउँदा किन आवाज आउँछ ?”
अमेरिकामा ७० वर्षअघि एक किसानले एउटा कुखुराको टाउको काटिदिए । तर, टाउको काटिएको त्यो कुखुरो तत्काल मरेन, १८ महिनासम्म बाँचिरह्यो । चकित बनाउने यो घटनापछि यो कुखुरो ‘मिराकल माइक’ नामबाट विश्वचर्चित बन्यो । यो टाउको काटिएको कुखुरो यति लामो समयसम्म कसरी बाँच्न सक्यो ? १० सेप्टेम्बर १९४५ मा कोलाराडोस्थित फ्रुटामा रहेको आफ्नो
Edit“१८ महिनासम्म कसरी बाँच्यो टाउको काटिएको यो कुखुरो !”
काठमाडौँ । तपाईंहरुको आँखा जुध्यो, उनले तपाईंलाई झवाट्ट हेरे र त्यहि एक सेकेन्डको हेराइमा नै पुरुषले तपाईंको बारेमा पाँच कुराहरु हेरि सकेका हुन्छन् । ती पाँच कुराहरु के हुन् ? पढौं न त । कपाल बाँध्नु भएको छ कि खुल्ला कुनै पनि महिलाको कपाल खुल्ला छ कि बाँधिएको छ, पुरुषहरुले यो कुरा
Edit“पहिलो हेराइमा पुरुषहरुले महिलाको याद राख्ने ५ कुरा”
२०७४ चैत्र १९
हजुरलाई थाहा छ रु एक मुखे रद्राक्ष को दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ । त्यसैले कमेन्टमा “ॐ “लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिन भित्र आकस्मिक धनको योग हुनेछ बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला । एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दुर्लभ तर
पेट्रोलको मूल्य घट्यो, यस्तो छ नयाँ मूल्यदर
नेपालमा उत्पादित चाउचाउको अमेरिकामा माग